Uvavanyo lwebhetri, ukuqinisekiswa kwebhetri, ibhetri UN38.3 -MCM
Isiqinisekiso se-MCM saseGuangzhou kunye nenkampani yokuvavanya
Yenza iSiqinisekiso kunye noVavanyo lube Lula kwaye lube Lumnandi.
I-Guangzhou MCM Certification & Testing Co., Ltd. (emva koko ibizwa ngokuba yi-MCM) ngumbutho weqela lesithathu ozimeleyo okhokelayo kwihlabathi, okhethekileyo ekuboneleleni ngolwazi oluphambili kunye nesisombululo sobuchwephesha sovavanyo lwebhetri kunye nesiqinisekiso kumhlaba jikelele.
I-MCM isekwe ngokwenkqubo yolawulo lomgangatho ISO/IEC 17020 & 17025 kunye nenkqubo yolawulo lokhuseleko lolwazi ISO/IEC 27001, kwaye yamkelwe yiCNAS, CMA, CBTL, CTIA.
Ubuncinane boQhagamshelwano ukuya koBuphezulu
I-MCM inamathela kwisicwangciso sophuhliso sokuba ishishini elincinci kufuneka liqhubeke liphucula kwaye likhuthaze amandla ukuze libe likhulu kwaye lingabi nolangazelelo lokuphumelela ngokukhawuleza.
I-MCM igcina ukulingana kwayo kwaye igxile ekuboneleleni ngovavanyo kunye nenkonzo yoqinisekiso lweemveliso ezahlukeneyo zebhetri ngendlela ezinzileyo.Kungale ndlela kuphela apho i-MCM inokuba noxanduva kubaxumi bayo kwaye inike izisombululo ezintle ngendlela eqhubekayo.
Bhrawuza nge: Konke
Indawo yovavanyo lwesiqinisekiso sebhetri ye-ESS...
Yenza isatifikethi kunye novavanyo lube lula kwaye lube mnandi.UMBONO WETHU:
Yenza Ihlabathi Likhuseleke.
Nceda ngamnye kunye nabo bonke abasebenzi bakhule;
Umoya womsebenzi wezandla.